Imikhuba Yokubuka I-imeyili Iyashintsha Ngokushesha | Martech Zone
Imikhuba yokubuka i-imeyili iyashintsha ngokushesha
NgoMsombuluko, Septemba 19, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Lokhu infographic engakholeki kusuka I-Litmus ikhombisa ushintsho olukhulu ekuziphatheni kokubukwa kwe-imeyili ngonyaka odlule! Kusuka ku-infographic:
I-imeyili ihlala ingumsebenzi onamandla kakhulu online online. Eqinisweni, abasebenzisi be-imeyili kulindeleke ukuthi bafinyelele ku-3.8 billion ngonyaka ka-2014; lokho cishe kuyisigamu sabantu abasemhlabeni manje, nokukhuphuka okukhulu kusuka kwabasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.9 ngo-2010. Manje njengoba iningi selinama-Smartphones kanye nama-iPads, ngabe ukhona umuntu osangena ukuze abuke imilayezo yabo kumqapha? Lapha, sibheka ukuthi amafoni ethu kanye namanye "amathoyizi" obuchwepheshe ashintshe kanjani indlela esibheka ngayo i-imeyili.
Sep 23, 2011 ngo-4: 44 PM
I-athikili enhle! Imininingwane emangazayo futhi enhle kakhulu, ifundeka kalula. Amaklayenti ethu e-EmailList.net abika okutholakele okufanayo ngokuya ngezibalo zabo nakwethu futhi. I-imeyili ihlala inamandla kakhulu kuleli qophelo futhi ukubona izibalo ezinjengalezi kungenza ngiqiniseke ngokwengeziwe ukuthi sinikeza insizakalo ebalulekile kumakhasimende ethu!